अष्ट्रेलियाको सिड्नी नेपालमय बन्यो,नेपाल महोत्सवमा हजारौं सहभागी - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको सिड्नी नेपालमय बन्यो,नेपाल महोत्सवमा हजारौं सहभागी
Posted by Himalayan Kangaroo | ११ मंसिर २०७३, शनिबार ०५:०६ |
सिड्नी । प्रवासी नेपालीहरुको संगठन एनआरएनए अष्ट्रेलियाले शनिबार सिड्नीमा नेपाल महोत्सवको आयोजना गरेको छ ।
नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर आयोजना गरिएको महोत्सवमा यसपटक उल्लेख्य सहभागीता रहेको बताइएको छ । कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, वाणिज्यदूतहरु, एनआरएन पदाधिकारीहरुका साथै झण्डै ५० हजार दर्शकहरु सहभागी हुने अपेक्षा गरेको छ ।
उत्साहका साथ सहभागी भएका दर्शक,उनीहरुका रंगीविरंगी पोशाक,नेपाली गीत संगीत र सडकभरि सजाइएका नेपाली राष्ट्रिय भण्डाले अहिले यहाँको माहोल नेपाल बनेको छ । मेलामा नेपाली खाना,नेपाली पुस्तक पत्रपत्रिका लगायत नेपालीपनका स्टलहरु समेत छन् । नेपाल महोत्सवमा सुगम पोखरेल,अञ्जु पन्त,कन्दरा व्याण्ड लगायतका कलाकारहरुको सांगीतिक प्रस्तुति समेत रहनेछन् । यस्तै विभिन्न मौलिक नेपाली नृत्यहरु पनि रहनेछन् ।
यसअघि शनिवार विहान सिड्नीमा प्रभातफेरिको आयोजना गरिएको थियो । विभिन्न झाँकीहरु सहित आयोजना गरिएको प्रभातफेरिमा पनि सयौंको संख्यामा नेपालीहरु भेला भएका थिए ।
सिड्नीमो मुख्यस्थान टाउनहलबाट कार्यक्रमस्थल डालिङ हार्बरसम्म करिब १ घण्टासम्म चलेको प्रभातफेरि नेपालीहरु मात्र नभएर विदेशीहरुले समेत सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, वाणिज्यदूतहरु, एनआरएन पदाधिकारीहरुका साथै सर्वसाधारणले उत्साहका साथ सहभागिता जनाएका थिए ।
आज दिनभरि चल्ने महोत्सवको अन्त्यमा पहिलोपटक आताशबाजी समेत गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
Previousअष्ट्रेलियामा बन्यो अहिलेसम्मकै महँगो नेपाली म्युजिक भिडियो
Nextअमेरिकी राष्ट्रपतिमा हिलारी क्लिन्टन पुनः निर्वाचित हुने सम्भावना
अष्ट्रेलियन सरकारद्वारा एउटा पीआर भिसा सहित तीनवटा नयाँ भिसाको घोषणा
२८ चैत्र २०७५, बिहीबार ०७:२३